चलचित्र ‘भारत’ : ३०० करोड क्लबमा सामेल नहुँदै उत्रिनुका यस्ता छन् कारण - Everest Dainik - News from Nepal
चलचित्र ‘भारत’ : ३०० करोड क्लबमा सामेल नहुँदै उत्रिनुका यस्ता छन् कारण
मुम्बई, असार ६ । बलिउड स्टार सलमान खानको चलचित्र ‘भारत’ले बक्स अफिसमा आफ्नो लगानी उठायो । फिल्म निर्माणमा जोडिएका व्यक्तिहरुले धेरथोर मुनाफा पनि लिए होलान् । तर, सलमानको स्टारडम र प्रतिष्ठा अनुसारको विजनेस भने फिल्मले गर्न सकेन ।
फिल्म भारतको लाइफटाइम विजनेस २१० देखि २१५ करोडकै आसपासमा समेटिने देखिएको छ । जबकी फिल्म प्रदर्शन हुनुभन्दा पहिले ३०० करोडको आँकडा सजिलै पार गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो ।
सलमानको स्टारडमकै कारण पनि ३०० करोडको क्लबमा सामेल हुने अपेक्षा गरिएको फिल्म भारतले किन अपेक्षाकृत कमाइ गर्न सकेन ?
यसका चार कारण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
१. मसलाविहीन फिल्म
सलमान खानले बलिउडमात्र होइन, संसारभर नै थुप्रै प्रशंसक कमाएका छन्। फ्यानहरु फिल्मको टिकट यो सोचेर किन्छन् कि, उनको फिल्ममा प्रसस्त मसला हुन्छ। केही राम्रा गीत, जोरदार फाइटिङ, सलमानको हिरोगिरी। यी सबै चिजहरु फिल्म भारतमा छैन। त्यसैले दर्शकले यो फिल्म खासै रुचाएनन् र सिंगल स्क्रिन फिल्म हलमा व्यवसाय खासै हुन सकेन।
२. कमजोर स्क्रिप्ट
कोरियाली फिल्म ‘ओड टु माई फादर’ को हिन्दी रिमेक हो ‘भारत’। यसमा भारतीय संस्कृतिलाई मध्यनजर गर्दै केही परिवर्तन गरिएको थियो। कहानीमा इमोसन्स थियो, तर स्क्रिप्ट व्यालेन्स गर्ने चक्करमा इमोसन्समा कमै ध्यान दिइयो। यसले गर्दा फिल्मले दर्शकलाई बाँध्न सकेन।
३. हिट गीत नहुनु
सामान्यतयाः सलमानको फिल्ममा धमाकेदार गीतसंगीत हुने गर्छ । जब उनका फिल्ममा संगीत कमजोर हुन्छ, फिल्मले बक्स अफिसमा सफलता हासिल गर्न सक्दैन। यसको उदाहरण ‘ट्युवलाइट’ र ‘रेस ३’ हुन् । फिल्म ‘भारत’मा पनि सुपरहिट एउटा पनि गीत छैनन् । त्यसैले दर्शकले फिल्ममा भरपुर मनोरञ्जन लिन सकेनन् ।
याे पनि पढ्नुस सञ्जय दत्तले आफ्नी छोरीलाई हिरोइन बन्न नदिने खुलासा
४. सलमान र क्याटरिनाको लुक्स
चलचित्र रिलिज हुनुभन्दा पहिला सलमानलाई विभिन्न अवतारमा देखाइएको थियो । उनी युवादेखि वृद्धसम्मको लुक्समा देखिएका थिए। तर फिल्म हेर्दा सलमानको लुक्समा खासै फरक देखिएन। बुढाको गेटअपमा पनि सलमान उमेरभन्दा निकै कमजस्ता देखिए। क्याटरिनाको लुक पनि दर्शकले खासै मन पराएनन् । दर्शक क्याटरिनालाई ग्ल्यामरस अवतारमा देख्न मन पराउँछन् नाकि साधारण अवतारमा। त्यसैले अपेक्षाकृत दर्शक हलमा गएनन् । एजेन्सी